Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneen dachee Oromoo fi handhuura Oromiyaa tahuu ammas irra deebi’ee ibse. – Oromedia
Home » Uncategorized » Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneen dachee Oromoo fi handhuura Oromiyaa tahuu ammas irra deebi’ee ibse.
Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneen dachee Oromoo fi handhuura Oromiyaa tahuu ammas irra deebi’ee ibse.
May 6, 2017 @oromedia 0 Uncategorized,
(Oromedia, 6 Caamsaa 2017)Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneen dachee Oromoo fi handhuura Oromiyaa tahuu ibsa Caamsaa 5 bara 2017 baaseen ammas irra deebi’ee ibse.
Ibsa mataduree “Finfinneen Lafa Oromoo ti!” jedhu jalatti bahe kana irratti ABOn akka hubachiisetti, waa’ee lafa Oromoo kan murteeffachuu qabu ummata Oromoo ti.
Akka ABOn ibsetti, murni TPLF gaaffii haqaa ummanni Oromoo dhiyeessaa jiruuf deebisaa sirnaa laachuurra kallattii xiyyeeffannaa isaa jijjiiruuf sababoota adda addaa tarrisuu fi shiroota baraman dhimma itti bahaa ture xaxuutti fuuleffateera.
“Ummanni Oromoo Finfinneerratti mirga abbummaa fi bulchiinsaa guutuu qaba,”kan jedhe ABOn, “hireen Oromiyaa hiree Finfinneen qabdurraa addummaa tokkollee akka hin qabne ifa gochuu barbaada,”jechuun ejjannoo isa aibseera.
Qabsoon saamicha murni TPLF Finfinneerratti gaggeessaa jiru dhaabsisuuf gaggeeffamaa jirus, qaama qabsoo bilisummaa OROMIYAA fi ummata Oromoo taúu ABOn hubachiiseera.
Waan taheefuu, ummanni Oromoo golee Oromiyaa hundarraa fi bakka jiru maraa sirna abbaa irrummaa TPLF ummataa fi biyya keenyarraa kaasuuf tokkummaan akka sossohu ABOn waamicha isaa dhiyeesseera.
Labsiin dhiyeenya kana wayyaanedhaan baafame fedhii fi dantaa ummataa fi biyya keenyaa kan hin calaqqisne waan taheef, bifa barbaachisaa tahe hundaani fi sadarkaa marattuu akka dura dhaabbatamu Addi Bilisummaa Oromoo ammas irra deebinee yaadachiiseera.
Guutummaa IBSA ABO Afaan Oromoo: Ibsa ABO Caamsaa 05,
English: 2017 OLF Press Release May 05,
Amharic: 2017 የኦነግ መግለጫ -ግንቦት 05 ቀን 2017ዓም
Tags: ABO, Finfinne, Finfinnee, Guyyaa Gootota Oromoo, OLF, Oromia, Oromia. Oromo, Oromo
Previous: Guyyaan Yaadannoo Gootota Oromoo Ugaandaatti Kabajame
Next: Kora xiqqaan miseensotaa gaggeeffame; Guyyaan Gootota Oromoos kabajame.
(Ijoo Dubbii ABO) Diinni waloo nuti (Oromoon) akka Sabaatti qabnu humna weerartuu alagaa kan afaan qawweetiin biyya teenya (Oromiyaa) dhuunfatee mirga biyya teenya irratti abboomuu...
Guyyaan Yaadannoo Gootota Oromoo Ugaandaatti Kabajame